Hojmaanni fayyadamtoonni seera qabeessummaa qorichaa bilbilaan mirkaneessuu danda’an ifoome – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Hojmaanni fayyadamtoonni seera qabeessummaa qorichaa bilbilaan mirkaneessuu danda’an ifoome
On Oct 16, 2020 89
Finfinnee, Onkololeessa 6, 2013 (FBC) – Hojmaanni fayyadamtoonni seera qabeessummaa qorichaa bilbilaan mirkaneessuu danda’an ifoomuu ibsame.
Abbaan Taayitaa Nyaataa fi Too’annoo Qorichaa Ityoophiyaa dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa (USAID) waliin ta’uun hojmaata fayyadamtoonni seera qabeessummaa qorichaa bilbilaan mirkaneessuu danda’an ifoomsaniiru.
Hojmaatichi I veeriifaay (i. verify) kan jedhamu yoo ta’u, interneetiin kan hojjetu ta’uu ibsameera.
Ministir deettaan Ministeera Fayyaa aadde Saahiralaahii Abdullaahii hojmaata kana fayyadamtoonni haala salphaan fayyadamuun seera qabeessummaa qorichaa mirkaneeffachuu danda’u jedhan.
Daayreektarri jeneraalaa Abbaa Taayitaa Nyaataa fi Too’annoo Qorichaa aadde Heeraan Garbaa gama isaaniin, utubaalee sirnoota bu’uraa fayyaa keessaa galteen isa tokko ta’uu eeraniiru.
Qulqullinna galtee fi fayyummaa isaa eegsiisuuf hawaasni abbaa sirna too’annoo akka ta’uuf teeknooloojii kallattii kaa’ame deeggaru ta’uu dubbachuu isaanii ragaan Ministeera Fayyaarraa argame ni muul’isa.
Kaappiteen Qaalkidaan Girmaa sadarkaa balaliisaa olaanaa Erbaasii E-350 argachuun…
Lammiin Ityoophiyaa saamunaa harkaa bifa huccuu fakkaatuun kalaqe
Appilikeeshiniin walbichiisisaa feesbuukii hawaasa Ityoophiyaaf eegale
Waliigalteen sirna odeeffannoo hojii gabaa ammaayyeessu dandeessisu mallattaa’e
Kaappiteen Qaalkidaan Girmaa sadarkaa balaliisaa olaanaa…
Lammiin Ityoophiyaa saamunaa harkaa bifa huccuu fakkaatuun…
Appilikeeshiniin walbichiisisaa feesbuukii hawaasa…
Oduu biyya keessaa3380